AKHRISO+XOG: Axmed Kharaash ma wuxuu door biday Saaxiibtinimada Dirir mise nidaamka Shaqo ayuu ilaaliyey? – Puntlandtimes
AKHRISO+XOG: Axmed Kharaash ma wuxuu door biday Saaxiibtinimada Dirir mise nidaamka Shaqo ayuu ilaaliyey?
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxweyne kuxigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan (Karaash) ayaa shalay soo saaray wareegto uu shaqada ugu fasaxayo taliyaha qeybta booliska ee gobalka Nugaal ee sida KMG ah u hayay xilkaas, oo uu shaqada ka joojiyey Taliyaha ciidamada Booliska Jen, Muxuyadiin Axmed Muuse.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in shaqo joojinta Cabdixamiid Dirir ay ahayd shaqo xumo uu ku arkay Taliyah guud ee ciidamada Booliska, uuna kala hadlay madaxda sare ee dawladda.
Xogta ay heshay Puntlandtimes.com waxay cadeynaysaa in Taliyaha ciidamada Boolisku amaro badan soo siiyey Taliyaha qeybta ee uu shaqada ka joojiyey, laakiin wuu diiday amarada qaarkood, taas oo muujisay in aysan dhinacyadu wada shaqeyntooda aheyn mid toosan.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland ahna Kusimaha Madaxweynaha Axmed Karaash ayey gaartay dacwada labada dhinac, waxaana xogta ay heshay Puntlandtimes.com ay cadeynaysaa in uusan dhexdhexaad ka noqon dhacdadan.
Kusimaha Madaxweynuhu wuxuu go’aansaday in uu xooga saaro Saaxiibtinimadii ka dhaxaysay isaga iyo Taliyaha KMG ah ee qeybta Booliska gobalka Nugaal, maadaama xiligii ole-olaha doorashada ay wada ahaayeen Saaxiibo dhaw.
Taasi, waxay keentay in Kusimuhu soo saaro wareegto Madaxweyne, taas oo shaqada loogu fasaxayo Taliyaha KMG ah ee qeybta Booliska gobalka Nugaal, talaabadaas dad badan ayaa su’aalo galiyey.
Sharciyaqaanadu waxay qabaan in Madaxweyne kuxigeenka looga baahnaa in uu si dhexdhexaadnimo ah ku galo qadiyaddan, oo uu labada dhinacba la hadlo, ka dibna xaliyo waxyaabaha keenay khilaafka shaqo ee dhexyaalay.
Taliyaha ciidamada Booliskana ku amro in uu shaqadiisa u fasaxo taliyaha qeybta Booliska, laakiin taasi ma dhicin, waxaana muuqata in aan wali Hay’addaha dawliga ah ee Puntland aysan fahmin hanaanka shaqo-wadaaga iyo kala sareynta amaradda.
hadan ka hadlo wax yalaha masulinta puntland dhex yala oo aan kala xadeysnan & waliba somaliya oo dhan,waxana kenaya Dastuurka wadanka oo aan lahan hab raac & iyado xata waxii dasturku Qabo aan lagu dhaqmen,waxa kale oo aan mesha kamarnan labadi masul oo is afdhafa ama is fahmi weyda iska hor’imaad dhaex maro kadibna Awood laysu shegto ayadoo Qof kasta waxba ureban.